Iwu nyocha Iwu na nzuzo na Asia - Ngwọta OMG
Otu n'ime nnukwu nsogbu nke nchekwa bụ onye na-achịkwa anyị yana otu esi. “Nke a bụ teknụzụ nwere ezigbo ike iji rụọ ọrụ dị ka njikwa na counterweight na ike ndị uwe ojii,”
Enwekwara ike ịnwe ụfọdụ uru nchekwa ọha na eze maka teknụzụ ndị ọzọ: mmata ihu. Can nwere ike nyochaa njirimara mmadụ iji tụnyere ha na profaịlụ echekwara na nchekwa data, dị ka ikikere nke Ngalaba ofgbọala. Dijitalụ “mkpịsị aka ihu” nke usoro ihe onyonyo gosipụtara nwere ike iji nyere aka chọta ndị furu efu na ọrịa Alzheimer, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ndị na-enyo enyo, ma ọ bụ onye ọ bụla
Togwọ ahụ machibidoro iji teknụzụ amata ihu ya yana kamera ndị uwe ojii na-eme ka ọha na eze na-eleru anya. Ọ bụ ndọtị eke nke iwu afọ gara aga iji hụ na ọha na eze nwere ike ịnweta ndekọ igwefoto n'ikpeazụ. Ọ na - achọpụta na kamera ahụ na - aga n'ihu na - arụ ọrụ dị ka ebumnuche ya, iji nwekwuo ntụkwasị obi na ndị mmanye iwu, karịa ịnyefe ndị uwe ojii ike nke teknụzụ ọha na eze.
Otu n'ime nnukwu nsogbu nke nchekwa bụ onye na-achịkwa anyị yana otu esi. "Nke a bụ teknụzụ nwere ezigbo ikike iji rụọ ọrụ dị ka njikwa na counterweight na ike ndị uwe ojii," \_
Enwekwara ike ịnwe ụfọdụ uru nchekwa ọha na eze maka teknụzụ ndị ọzọ: mmata ihu. You nwere ike nyochaa njirimara mmadụ iji tụnyere ha na profaịlụ echekwara na nchekwa data, dị ka ikikere nke Ngalaba ofgbọala. Dijitalụ “mkpịsị aka ihu” nke usoro ihe onyonyo gosipụtara nwere ike iji nyere aka chọta ndị furu efu na ọrịa Alzheimer, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ndị omekome na-enyo enyo, ma ọ bụ onye ọ bụla.
Nzuzo 6692 3 Echiche Taa